“Waxaan u maleynayaa in albaabada Real Madrid ay marwalba u furnaan doonaan laacibka…” – Ramos – Gool FM
“Waxaan u maleynayaa in albaabada Real Madrid ay marwalba u furnaan doonaan laacibka…” – Ramos
(Madrid) 10 Sebt 2019. Kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa muujiyay sida uu u xiiseenayo imaatinka mid ka mid ah xiddigha ay Los Blancos sida xoogan kaga dooneysay suuqii dhawaa ee xagaaga.
Ramos ayaa aaminsan in xiddiga reer France ee paul Pogba uu kooxda Real Madrid siin karo dheelitirnaan, haddii uu yimaado garoonka Santiago Bernabéu.
Ramos ayaa wuxuu u sheegay wargeyska “Express” ee dalka England:
“Waxaan u maleynayaa in albaabada Real Madrid ay marwalba u furnaan doonaan ciyaartoyda wanaagsan sida isaga oo kale, aniga ahaan, Pogba waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu waaweyn ee kubadda cagta”.
“Waa ciyaaryahan qaas, wuxuuna xili hore qiimahiisa ku muujiyay kooxda Juventus, si la mid ah haatan kooxda Manchester United, wuxuu awoodaa inuu ina siiyo isku dheelitirnaan”.
“Pogba wuxuu leeyahay saamayn cad ee dhanka weerarka ah, iyo waxyaabo jir ahaaneed ee la yaab leh”
Paul Pogba oo 26 jir ah ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Real Madrid suuqii dhawaa ee xagaaga, kaddib markii uu si cad u sheegay inuu doonayo tijaabinta loolan cusub ee meel kale ah.
Laakiin ugu dambeyntii wuxuu sii joogay safka kooxda Man United xili ciyaareedkan, sababa la xiriira in Red Devils ayaa diiday inay ku fasaxdo adeegiisa qiimo ka yar £ 150 milyan, sida lagu sheegay warbixino badan.
Daafaca Barcelona ee Samuel Umtiti oo hoos u dhigay u dhaqaaqista koox weyn oo ka dheesha Premier League